Ọkachamara Ndị Ọha na Ọha
Ma ọzọ taa a kpọrọ m òkù na ole na ole ihe omume - na mmadụ na site na webinar - iji nweta ikpughe na a onye soshal midia na ihe ha na-eme na mgbasa ozi mgbasa ozi. Ka m na-enyocha profaịlụ ha, ozi LinkedIn ha, saịtị ha na blọọgụ ha, achọtaghị m ozi gbara ọkpụrụkpụ na-akwado echiche ahụ bụ na ha bụ ndị ọkachamara n'ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
elekọta mmadụ media ọkachamara? N'ezie? Ikekwe ha nwere iri puku kwuru iri puku ndị na - eso ụzọ Twitter, ọtụtụ narị kwuru na ha Facebook mgbidi, na ịbụ onye otu na iri na abụọ ma ọ bụ netwọk. Ikekwe n'ihi na ha bụ a charlatan, shark ma ọ bụ geek.
Kedu ihe m ga-ekewa dị ka mgbasa ozi mmekọrịta ọkachamara? Ahụrụ m Peter Shankman n'anya iru eru na iru eru maka ndi okacha amara nke ndi mmadu. Aga m agbakwunye - na ọ bụrụ na ọ gbasara azụmahịa - ọ ga-amasị m ịhụ a ogologo ndepụta nke atụ nsonaazụ na ntụnye aka n'ofe ụlọ ọrụ na atụmatụ dị iche iche.
Ka m kee onwe m dika ọkachamara? M na - eme - mana ọ bụghị n’ihi na m na - ekwu na m ghọtara ya niile. Nke a bụ nwata na-ajụ ma na-agbanwe ya kwa ụbọchị. Ọ na-agbanwe omume azụmahịa. Ọ na-agbanwe agwa ndị ahịa. Afọ iri m nwere na - agbanwe site na ire ahịa na azụmaahịa nchekwa data, ịre ahịa email, wdg. Nyeere m aka ịgbanwe ọnọdụ m ugbu a.
Anaghị m ekwu na m bụ ọkachamara n'ihi na m maara na-elekọta mmadụ media… M na-azọrọ na m bụ ọkachamara n'ihi ọrụ m rụzuru ụlọ ọrụ buru ibu na obere na-eto eto ha azụmahịa, na-ejigide na upsell ahịa, ma belata ahịa ọrụ oku site na-eji usoro mgbasa ozi eme ihe nke ọma.
M na-ekwu na m bụ ọkachamara n'ihi ọrụ m na-arụ ugbu a?
mgbe VP nke ikpo okwu ntanetị, Anyị nyeere ọtụtụ azụmaahịa aka ịzụlite mgbasa ozi mmekọrịta ha na usoro nyocha iji gbalịsie ike ịre ahịa ahịa inbound.
Enwere m ihe ịga nke ọma Medialọ Ọrụ Mgbasa Ozi Ọhụrụ na a siri ike akụkọ ihe mere eme nke na-enyere ụlọ ọrụ aka ịzụlite na-eme ha na-elekọta mmadụ azum.
Ngwakọta na akụrụngwa akpaaka m mepụtara na ịde blọgụ, email, video na ebe mkpanaka eji abanyela ọtụtụ iri puku ụlọ ọrụ.
The 2 -elekọta mmadụ netwọk Enyere m aka ịmalite ma gaa n'ihu na-enyere aka ịgba ọsọ.
Akwukwo nke m nke gbasara 5 + afọ (gbakwunye di na nwunye na nyiwe ndị ọzọ) na-agwa mgbasa ozi mgbasa ozi na teknụzụ ahịa.
MBA! Ọ dịghị nke a na-eru m dị ka ihe ọkachamara.
Akpọrọ m onwe m ọkachamara maka ihe atọ:
Ulo oru na acho ọkachamara, ọ bụghị gurus na geeks.
Kpọ onwe m onye ọkachamara na-ejide onwe m n'ọkwá dị elu na atụmanya na ụlọ ọrụ m ga-emerịrị.
Ekwenyere m nkọwa ahụ:
Ọkachamara bụ onye a maara ebe niile dị ka isi iyi ma ọ bụ nka a pụrụ ịdabere na ya nke ndị ọgbọ ya ma ọ bụ ọha na eze nyere ikike na ikpe ikpe ma ọ bụ ikpe ikpe ziri ezi, n'ụzọ ziri ezi, ma ọ bụ n'ụzọ amamihe. Ọkachamara, n'ozuzu ya, bụ onye nwere ọtụtụ ihe ọmụma ma ọ bụ ikike n'otu akụkụ ọmụmụ ihe.
Enwere m amamịghe karịa ndị ọzọ niile nọ ebe ahụ? Nope.
Ama m ihe niile gbasara soshal midia? Ọ bụghị n'ezie.
Ndi okachamara ndi ozo na-ekwenyere m mgbe nile? Ọ bụghị ohere!
Ọrụ m niile ọ gara nke ọma? Mba - mana otutu n'ime ya nwere.
Ekwenyere m na enwere m akara aka pụtara maka ịtụle usoro azụmaahịa, ndị ahịa azụmaahịa, na ịchọpụta etu teknụzụ ga-esi mezie ọdịiche ahụ. Achọghị m dina ndi ahia ma gwa ha na ha ga-abụ akụkụ nke mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịlanarị. M na-eso ha ekerịta ọtụtụ ihe ịga nke ọma, agbanyeghị! Ọ bụ onye na-ajụ ajụ nke m kwenyere na ya ma nwee olile anya ịhụ nnabata nke oke - ọ bụghị n'ihi na azụmaahịa ọjọọ nwere ike ịchịkwa ya - mana n'ihi na nnukwu azụmaahịa nwere ike ịkwado ya.
Ekwenyere m na mgbasa ozi mmekọrịta na-ejikọ azụmaahịa na atụmanya, na-ewulite mmekọrịta dị mma n'etiti ndị ahịa na ụlọ ọrụ, na-akwalite ụlọ ọrụ iji melite ọrụ ndị ahịa, na-ewuli nghọta, ma na-agba ume iduzi echiche, onyinye azụmaahịa na mmalite great niile maka azụmaahịa.
Na nke ahụ, ndị enyi m, bụ nke m ọkachamara echiche.
PS: Ekwenyesiri m ike na ọ bụrụ na ịlaghachi na blọọgụ m ma ọ bụ na-ekwu na blọọgụ ndị ọzọ na etinyere m na mmadụ ole na ole na-ekwupụta nka ha. Ugbu a ọ bụ oge gị. 🙂
Jul 14, 2009 na 8: 48 AM
Ọ na-atọ m ụtọ na na blọọgụ abụọ dị iche iche m gụrụ uru nke 'ọkachamara' bụ arụmụka. N'ime akwụkwọ abụọ m gụrụ na mbụ, ọ pụtara ileghara anya (ma emesịa ọ bụghị akwụ ụgwọ) onye ọ bụla na-eji okwu ahụ bụ 'ọkachamara' dịka akụkụ nke ntozu ha, ma ị tụgharịrị wee kwuo otu n'ime otu isiokwu blọgụ dị ka ihe kpatara ịkpọ gị ọkachamara. , ma mgbe ị kpọtụrụ akụkọ ahụ na-egosi na ị bụ ọkachamara. Yabụ kedu nke ọ bụ? M tụkwasịrị gị obi n'ihi na ị na-ewere onwe gị dị ka ọkachamara wee kwuo Shankman, ka m na-eleghara ihe niile ị na-ekwu si ebe a n'ihi na ị na-ewere onwe gị dị ka ọkachamara wee kwuo Shankman? Aghọtaghị m ihe ọjọọ, enwere m ekele maka ihe niile ị rụzuru, ana m agbaso blọgụ gị n'ihi ya, n'ụzọ doro anya, ahụrụ m uru n'ihe ị na-ekwu… mana mgbagha dị ka nke a mere ndị ahịa m ji nwee mgbagwoju anya.
Julaị 14, 2009, elekere 12:28 nke ehihie
Ndewo Robert! Ekwetara m kpamkpam na esemokwu ahụ - ọbụlagodi ihu abụọ - n'akụkụ m na ọkwa a. M na-ezo aka na posts ndị ọzọ n'ihi na ọ ga-amasị m ka mkparịta ụka ahụ gaa n'ihu n'echiche dị iche iche. N'oge gara aga, m na-ezere okwu 'ọkachamara'. Ka m na-aga n'ihu na-arụkwu ọrụ n'ọhịa, Otú ọ dị, m na-ahụ ka ndị mmadụ na-eji aha 'ọkachamara mgbasa ozi mgbasa ozi'.
Achọpụtara m onwe m n'otu oge na ọrụ m ebe m na-enwe nchegbu na azụmahịa na-aghọgbu site onwe-kpọsara 'ọkachamara' ma ulo oru na-aga n'ihu na-achọ ha. M na-aga n'ihu na-ekiri azụmahịa ka ọ na-agakwuru ndị na-enweghị ahụmahụ ma ọ bụ 'ọmụma'? Ma ọ bụ - m na-akpọsa onwe m onye ọkachamara, gosipụta uru m bara, wee nweta azụmahịa ahụ?
M ga-akpọ onwe m ọkachamara si ebe a n'ihi uru azụmahịa. Ọzọkwa - enwere m ekele maka gị na ndị na-agụ akwụkwọ m ndị ọzọ na-ejide m n'ụkpụrụ dị elu!
Daalụ - Enwere m ekele maka nkwupụta ahụ!
Jul 14, 2009 na 6: 14 AM
Ekwenyere m gị Douglas. Ọ na-ewe ọtụtụ afọ nke ahụmahụ na mma mmepụta (gụnyere ọdịda onye, ​​anyị na-agụ nanị otú mmadụ si bilie mgbe ndị dị otú ahụ ọdịda ya mere ọ ka dị mma) ka a na-akpọ ọkachamara. Inwe ọtụtụ puku ndị na-eso ụzọ na Twitter anaghị eme otu.
Julaị 14, 2009, elekere 12:51 nke ehihie
N'ọzụzụ ọ bụla ọzọ m hụtụrụla ọtụtụ arụmụka banyere onye bụ ọkachamara, onye na-abụghị na ihe mejupụtara ụkpụrụ nke inweta ọkwa ọkachamara. M na-aghọta nchegbu dị ka m kwa, ahụwo ọtụtụ ndị na-akpọ onwe ha na-elekọta mmadụ media ọkachamara ma ha enweghị ahịa nka na-aga na ya. Ha maara ngwaọrụ ndị ahụ, mana ọ naghị eme ka ha bụrụ ọkachamara n'ịzụ ahịa site na iji mgbasa ozi ọha na eze dị ka ọwa.
Abụrụla m onye na-ere ahịa ruo ọtụtụ afọ karịa ka m na-achọ ịnakwere, ma amụtala ọzụzụ ịzụ ahịa n'ofe ọwa niile, na-eji ụdị ụzọ ọ bụla, site na atụmatụ ruo na njedebe. Ịgbakwunye mgbasa ozi mgbasa ozi dịka ọwa ọzọ maka ịzụ ahịa bụ ọganihu sitere n'okike ma bụrụ otu, ọ dị mwute ikwu na ọtụtụ ndị na-ere ahịa elegharala anya ruo n'oge na-adịbeghị anya mgbe ha ghọtara na ha na-achọpụta ihe a ka mma.
Mana naanị ndị nwere ike ịkpọsa gị ọkachamara bụ ndị ahịa gị na ndị ahịa gị. Ha bụ ihe akaebe na-akwado okwu ahụ.
Jul 15, 2009 na 4: 13 AM
Ekwenyere m na nkwupụta gị nke ọma, a na-etinye okwu ahụ "ọkachamara" n'ụzọ dị mfe. Amam na otutu ndi mmadu na-ere onwe ha dika ndi okachamara na social media ma na-ezu ohi echiche na atumatu odee ndi ozo wee na-akpo ha nke ha. Anọ m na usoro ugbu a nke ịmepụta na iwulite usoro mmekọrịta ọha na eze maka otu n'ime mba ndị kasị ibu ezigbo ụlọ na nke ahụ bụụrụ m ezigbo anya. Ekwenyere m na Deborah na nkwupụta ya, na naanị ndị ahịa na ndị ahịa nwere ike okpueze gị na mkpado ọkachamara. M ka na-amụta ọtụtụ ihe na hel na abụghị m ọkachamara, mana m na-arụ ọrụ na ya. Nnukwu akụkọ
Jul 15, 2009 na 4: 17 AM
Grrrrrrrrrrrrrr.. Gịnị kpatara na anyị ga-ekwupụta ọbụna ndị ọkachamara - Anaghị m enweta arụmụka ahụ dum. Ịgba egwu na ịkparịta ụka ya na-ewepụ ume na ndụ. Ọ̀ bụ n'ezie iji ume eme ihe bara uru?
Julaị 15, 2009, elekere 5:12 nke ehihie
M na-ekwenyekarị na gị. Ọ na-adị m mgbe niile iju onwe m na-ebuli onwe m aha dị ka 'ọkachamara'. Agbanyeghị, nke bụ eziokwu bụ na azụmaahịa na-achọ 'ọkachamara' na ọ bụ naanị ndị na-eji aha ka a ga-achọta.
Jul 17, 2009 na 2: 10 AM
N'ịmara gị ma soro gị rụọ ọrụ dị iche iche, enwere m ike ịsị na m ji obi m niile kwado ị na-ezo aka na onwe gị dịka ọkachamara. Dị ka i kwuru, aha ahụ sitere na ihe ịga nke ọma gị nakwa ọdịda gị dị ka Devid kwuru na nke mbụ. O nwere ike ịbụ na ị na-eme agadi, ma m maara na mgbe m nwere ajụjụ gbasara ihe metụtara nkà na ụzụ na mgbasa ozi ọha na eze, m ga-enweta azịza dabere na ahụmahụ, ihe ọmụma na ntụkwasị obi. Nke ahụ bụ ihe m ga-achọ n'aka ọkachamara n'ofe isiokwu ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla.
Nov 4, 2011 na 12:52 ehihie
Doug, nke a bụ ọkwa dị egwu maka ọtụtụ ihe kpatara ya.
1. Ọ bụ kpọmkwem na ruo n'ókè: Ọ dịghị BS Ọ na-amasị m skipping na appetizers na-na-na isi N'ezie.
2. Ọ bụ kpọmkwem: Ọ bụla geek nwere ike chepụta otú tweak na-elekọta mmadụ media, ma ndị ọkachamara n'ịwa azụmahịa (aka "ala akara").
3. Ọ bụ eziokwu: Anyị na-enyocha ókèala ọhụrụ ebe a na-agbanwe agbanwe ma na-agbanwe ngwa ngwa. Ndị ọkachamara n'ezie bụ ndị nwere obi ike ma dị umeala n'obi na-ekwu eziokwu ma kwuo, "Amaghị m", wee chọta azịza ya, kama ime ka hà maara ya niile.
Ọ mara mma! Ekekọrịtara!
Nov 4, 2011 na 12:56 ehihie
Daalụ nke ukwuu, Mike!